dnScoop kwuru dnScoop.com ọ baghị uru ọ bụla | Martech Zone
Aaron na-egosi na dnScoop.com, dịka igwe ndị ọzọ dị ọnụ ahịa, enweghị isi.
Ekwetaghị ha? Naanị jụọ mmmmmmmmmmmm ego ole dnScoop.com bara uru ically Elee, ha kwetara:
Ikekwe ọ bụ naanị m, mana m gaara ehichapụ koodu iji kwuo na ọ ruru $ 500k.
Enwere m ikike site na saịtị ndị ahụ bara uru. Bọchị ndị a echeghị m na ngalaba aha n'ezie nwere ike itinye uru na saịtị.
N'ihe na-akpali mmasị, agara m dnscoop, saịtị m ruru $ 64,480 dị ka ha si kwuo. Ọ bụrụ na m were ọnụọgụ ahụ wee kee ya site na ego saịtị ahụ, nke ahụ bụ ihe m ga - eme n'ime afọ 2.5 ma ọ bụrụ na ọnọdụ dị ugbu a (nke m ji n'aka na ọ ga-aga n'ihu na-aka mma). Mana ọ bụ echiche mara mma nke ga - enyere gị aka nyochaa saịtị gị nke ọma. Ndị ahịa ọ bụla ??? 😉
DNScoop bụ ihe yiri-nke http://www.smartpagerank.com, na ọ bụ ihe ọjọọ na na. Ha na-eji usoro a na-ejighị n'aka na-ezuru okporo ụzọ weebụsaịtị! Biko gụọ nke a maka nkọwa ka mma: http://www.dnscoopsucks.com/
Mana ị ga-ekwu na ụkpụrụ na-adịkarị mma. Dị ka m nwere obi abụọ na onye ọ bụla ga-enye $ 20K maka saịtị m, mana ọ na-ekwu na ọ bara nnukwu uru.
Ọ na-enyekarị ụkpụrụ dị elu karịa ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na-eme.
Ọkt 16, 2009 na 6:59 AM
Ndewonu! Ahụla m ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ na-enye nyocha asọmpi n'efu. My ọkacha mmasị bụ ”Target =” _ oghere ”>http://www.estimix.com . O yiri ka ọ na-ewepụta ozi okporo ụzọ ziri ezi.